CALEEMAHA CAGAARAN EE TUBTA: SOBOBAHA UGU MUHIIMSAN IYO HABABKA LOOGA HORTAGO - SOOSAARKA DALAGGA
Maxaa sababa tubta caleenta jaalaha ah iyo waxa la sameeyo
Waxaa ka mid ah geedaha miro-geedeedka waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu xasilan uguna qabsoomi karin, laakiin waxaa lagu weerari karaa cudurka. Rasuulladii ugu horreeyay ee xaqiiqda ah in wax khalad ah ay la socdaan dhirta ayaa ah caleemo jaalaha ah oo u muuqday heerkulka xagaaga. Sababaha way ka duwanaan karaan, sidaa daraadeed, waxaa lagama maarmaan ah in kiis kasta si hab gaar ah u dhaqmo. Si aan loogu qaldamin, akhri macluumaadka hoose.
Haddii geedku uu bilaabo inuu bedelo midabka caleenta oo uu ka lumo xagga sare, markaas, waxay u badan tahay, sababta ay taasi tahay dhulka dhulka hoostiisa. Waxaa laga yaabaa in aad tixgeliso arrintan markaad beertay beerashada, laakiin marka tubuulka uu gaaro da'da shan sano, nidaamka xididkiisu wuxuu sii korayaa ciidda. Sidaa darteed, haddii geedka yar yar ee qoto dheer ee biyaha dhulka hoostiisa weyn, geedo qaangaar ah ayaa si fudud u gaari kara xididada. Dhibaatadan waxaa lagu xallin karaa gawaarida ama daadinta ciidda, ama sameysashada buurta.
Sabab kale, muuqaalka muuqaalka iyo dabeecadda, waa daadad joogta ah ee goobta daadad guga ama roobab muddo dheer ka dib. Xaaladdan oo kale, geedka waa in loo wareejiyaa buurta. Boorash laga beeray ayaa laga yaabaa inay bilaabaan inay caleemo huruud noqdaan. Waxaa laga yaabaa inay sababtu tahay tan la'aanta iftiinka. Maalin qorrax leh, fiiri si taxadar leh haddii hooska uusan ku dhicin seedling ka soo baxa dhirta ama koritaanka sii kordhaya. Haddii jawaabtu haa tahay, ka dibna isla markiiba ku sifee tubta, sidaas darteed markaa maaha in aad jarjartid geedaha kale.
Waa muhiim! Markaad geed soo beerto waxaad u baahan tahay inaad taxadar badan yeelatid. Haddii nidaamka xididku uu waxyeelo, ka dibna dhidibku wuxuu bilaabi doonaa inuu lakulo, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo dadaal badan si ay u sii xoogaystaan ​​oo ay u degaan.
Caadi ahaan, marka uu jiro roobab la'aan, tubaakada qaan-gaarka ah waxay u baahan tahay 6-8 baaldiyo oo biyo ah tobankii maalmoodba. Geed yar, oo ku xiran da'diisa, waxay u baahan tahay saddex ilaa shan baaldiyo muddo toban maalmood ah. Haddii aad ku shubayso biyo yar ama biyo yar yar, waxaa laga yaabaa in geedku uu bilaabo inuu huruud noqdo oo qalalo.
Laamaha la dhigo
Dareemka heerkulka degdega ah ayaa burburiya qoryaha. Haddii, marka uu jiro kulaylka, waxaad dhawaan furi doontaa nidaamka xididka ee tubta, ka dibna, waxay u badan tahay, waxay barafoobi doonaa inta lagu jiro dhaxan guga.
Haddii nidaamka xididka geedka ay saameeyeen, waxay lumisaa nafaqooyinka waxayna bilaabeysaa in ay dhinto. Haddii nidaamka xididku waxyeelo, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u quudiso geed bacrimiya oo rajeynaya in ay yeelan doonto awood ku filan oo ay dib ugu soo kabato. Lafaha kaliya ayaa ku dhici kara dhaxan habeenkii - markaa waxay u baahan yihiin in la gooyo.
Si loo tubaako in aan la qabin dhaxan, waa in si taxadar leh loo diyaariyaa xilliga qaboobaha iyo in aan guriga laga saarin waqti hore.
Ma taqaanaa? Goobta England waxaa loo yaqaan 'miro boqornimo', sababtoo ah Elizabeth II cuno laba plomme ka hor subax kasta subax kasta, kadibna wuxuu bilaabaa cunto.
Iyadoo la'aanta nafaqooyinka, caleenta geedku wuxuu akhriyaa jaalaha ka soo hooseeya. Caleemaha yar yar ayaa sidoo kale la saameeyaa.
Iyadoo la'aanta ciidda nitrogen caleenta waxay noqotaa midab cagaaran cagaaran, ka dibna si tartiib tartiib ah ayey u noqotaa huruud. Higsashada waa daciif iyo khafiif. Kobaca geedkii oo idil wuu joogsan karaa. Taa bedelkeeda, haddii ciidda la jilicsan yahay arrintan, ka dibna tubaakadu si dhakhso ah ayey u koraan, waxay ku dhacdaa mugdi, caleenta aan sinnayn ee cabbirka ballaaran. Wakhtiga ubaxyada iyo fruiting ayaa la socda dib u dhac weyn.
Haddii aad ku ciyaarto carrada ciidda iyo ciidda, waxaa jiri kara yaraanta magnesium. Leaves ayaa lagu daboolaa dhibco jaale ama casaan ah oo u dhexeeya xididdada. Kadibna wuxuu bilaabmaa dhimashada caleen ka soo cirifka, cirifkeeda iyo dhirbaaxo. Geedku wuxuu caleemaha saari doonaa hore, miraha wuxuu bilaabmaa inuu dhaco, xitaa cagaar. Haddii dhirta aysan ku filneyn fosoorkakadibna caleemuhu waxay helayaan naxaas ama hooska madow, ka dib markaa waxay noqon karaan madow oo qalalan. Geedkuna wuxuu si dhaqso ah u yaraa oo gaabiyaa. Miraha way yar yartahay oo aan dhadhamin.
Potashka gaajada ayaa keeneysa in carqaladeeyo isu dheelitirka biyaha. Geedka jiran, caleemuhu waxay sare u kacaan, waxay helayaan dusha huruudka ah, ka dibna waxay u egtahay midab buluug ah, jaale ah, oo marka ugu danbaysa madow.
Waqti xaadirka ah, nooca la dejiyay ee soonka waa la saxay sameynta unugta maqan ee ciidda.
Haddii ay jirto wax yar oo ka mid ah xubno ka mid ah ciidda, Bacriminta macdanta waa in la isticmaalaa: nitrogen, fosfate, potash.
Cudurada iyo cayayaanka ayaa sidoo kale si weyn u beddeli kara muuqaalka geedka.
Tani waa cudur fungal ah. Waxyaabaha ka soo baxa ciidda iyada oo loo marayo habka xididada waxyeeloobay ayaa hoos u dhacaya geedka. Koraaya, cayayaanka mycelium ee jirridda ee tuubada kaas oo juice dhaqdhaqaaqa. Natiijo ahaan, caleemaha ayaa laga mamnuucay cuntada, natiijada, waxay bilaabaan inay u dhintaan. Waxay isu beddelaan hurdi, lakab iyo hoos u dhac.
Tilmaamaha ugu horreeya ee cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in la hirgeliyo tubaakada "Previkur" ama "Topsin-M" - tan waxaa la sameeyaa kahor ubax iyo ka dib. Haddii calaamadaha cudurka ay noqdaan kuwo muuqda oo kaliya sare, ka dibna fungus, waxay u badan tahay, ayaa horey u dhirta geedka oo dhan, oo waxaa kaliya oo la gooyaa oo gubi karaa. Goobta geedka koray waa in lagu daaweeyaa jeermiska.
Ma taqaanaa? Waqtiyadii hore ee Jamhuuriyadda Czech, qofkii gaystay fal xun ayaa u baxay inuu wada toobad keeno wadaad. Waxa uu ku sii dari lahaa dembi, haddii keliya qofka weydiisanaya wuu ka shaqeyn doonaa. Sida caadiga ah, macdan qodista ayaa ahaa soo degitaanka tubta wadada. Sidaa daraadeed, hadda Balkans sidan wadooyinkan waxay ku koraan geedahan.
Sidoo kale nooc ka mid ah cudur fungal - wuxuu saameeyaa dhirta iyada oo loo marayo pistils of ubax, ka dibna ku faafaa caleenta iyo laamood dhalinyarada. Cudurku wuxuu ku shaqeeyaa heerkulka hooseeya -0.6-1.5 ° C iyo dabayl xoog leh oo qabow.
Haddii la ogaado midabka madow, markaa isla markiiba daawada geedka Horus, sababtoo ah haddii ubaxu uu bilaabo inuu hoos u dhaco iyo caleenta madow, waxaa lagaa tagi doonaa dalag la'aan. Iska yaree laanta la saameeyey iyo gubi.
Baro wax badan oo ku saabsan lafta lafta moniliosis: ka hortagga iyo daaweynta moniliosis on jeeriga iyo jeeriga, khudaarta.
Sida qiyaas ka hortag ah ee cudurka, waxaa lagu talinayaa in lagu daweeyo beerta "Mikosanom-V", Bordeaux isku dar ah, "Horus", "Hore" ka hor iyo ka dib ubax, kadibna 2-3 jeer oo kale oo dhexda ah laba toddobaad. Daaweynta ugu dambeysa waxaa la doorbidaa ka dib goosashada.
Video: la dagaallanka lafta dhagaxa moniliosis
Waa muhiim! Haddii calaamadaha moniliosis laga helay hal warshad, ku daawee geedaha oo dhan beerta, sida fungus ku faafo dabaysha, roobka, cayayaanka.
Cudur kale oo fungal ah - badanaa wuxuu saameeyaa caleenta iyo caleemaha, mararka qaarkood waxay ku dhacdaa midhaha. Calaamadaha cudurku waa dhibco yaryar oo casaan ah kuwaas oo si tartiib tartiib ah u kordha oo u daboolan dusha dhammaan caleenka. Wuxuu bilaabaa inuu ku foorarsado doontiisa, iyo gudaha gudaheeda waa xuubka lafdhabarta. Tartiib ahaan, xaashidu way dhimataa oo dhacdaa. Haddii uu cudurku si culus u saameeyo tubaako, markaas xuubka fangasku waa muuqan yahay dildilaaca cayayaanka. Copper sulfate iyo dareeraha Bordeaux ayaa ka caawin kara karbaashka. Waxaa loo shaqeeyaa sida geed, iyo dhulka ku wareegsan.
Sidoo kale akhri wax ku saabsan sulphate copper: codsiga beerta, waxyeellada iyo cawaaqibka sumowga jidhka bini'aadamka.
Iyada oo cudur this dhexe ee xagaaga, caleemaha on sare ee tubta waxay noqdaan cirro huruud ah, ka dibna soo jeestaan ​​caddaan iyo dhaco. Si tartiib ah, cudurku wuxuu ku faafaa hoosta taajka. Tani waxay dhacdaa dhowr sababood:
ciidda alkaline (wax badan oo lime ah ayaa laga sameeyay digada);
la'aanta cusbooyinka birta;
qaboojinta nidaamka xididka;
gaajada oksijiin ee xididdada ay sabab u tahay dabaysha ciidda.
Marka ugu horeysa ee cudurka, tubada waxaa lagu daaweyn karaa 2% sulfate ama anti-chlorozin. Isticmaal Hilat si aad u quudiso geedka.
Video: more on chlorosis dhirta
Markaad weerarto cayayaanka microscopic, caleemaha geedka waxay noqdaan huruud iyo cawl. Aphid waxay ku faaftaa xawaare aad u weyn, iyo in la burburiyo ma aha mid fudud, sababtoo ah waxay ku taallaa dhinaca danbe ee gabalaha iyo ka soo baxa geesaheeda, sidaas daroogooyinka sunta ah marka daaweyntu aanay gaarin himilada.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido dagaalka lagaga hortago aphids on plomme, isticmaalka daaweynta dadweynaha ka dhanka ah cayayaan ah.
Laamo waa in la googooyaa oo la gubaa, ka dibna lagu daaweeyaa kareemka chamomile, qadhaadh qadhaadh ah, toon, dushooda baradho, yaanyo, ama saabuun iyo iniin khardal ah. Horraantii gu'ga, daaweynta waa in lagu fuliyaa inta badan Vita, Decis ama Iskra.
La dagaallama cudurrada malax: dib u eegis
Horus ma i caawisay. Waxaa laga yaabaa in cudurku aad u dayacay. Plom ayaa ku dhintay. Meeshan waxaa si taxadar leh loo daaweeyay phytosporin iyo geedo yar yar ayaa la beeray.
Horus, Guriga iyo fiitamiin fudud oo buluug ah, saldhiga waa hal - copper. Sidaa daraadeed, daawo kasta oo daawo ah oo bakteeriyadu leedahay.
Kaliya 1. Ha badin. Copper weli woqooyi ma aha oo kaliya for fungi, laakiin dhammaan waxyaabaha ku nool guud ahaan. In badan oo ka mid ah ma fiicna. 2. Copper waxay faragelisaa biqilka ee dhirta ee fungus, laakiin kaliya taas. Haddii jiradu ay soo baxaan, caleemuhu way engegeen, ka dibna waa in la gooyaa, mar dambe lama daaweyn karo. Sidaa daraadeed, bakooradu waa qiyaas ka hortag ah iyo haddii aanad caajis ahayn laga bilaabo xilliga gu'ga, markaa waxay u badan tahay in natiijadu noqon doonto. 3. Waxaa jira wax la yiraahdo. fangasideedka nidaamsan ee limeeya boqoshaada, tusaale ahaan carrada, iyo sida qiyaasta ka hortagga, waxay waxtar badan u leeyihiin.
Sida aan aragno, ma fududa in loola tacaalo cudur kasta oo waxaa jira waxyaabo badan oo khasaaro ah. Sidaa darteed, way ka fiican tahay ka hortagga dhibaatada marka loo eego la dagaalanka. Si aad tan u samayso, raac shuruucda ku saabsan daryeelka caafimaadka. Haddii ay hore u dhacday in geedku si xun u dhaawacmay, ka dibna way ka sii fiicnaanaysaa inuu ka rido inuu ka khatar galiyo kuwa deriska la ah.